I-PSG yehlula i-Man United, kodwa i-Leipzig isazingela i-UEFA last 16 | Scrolla Izindaba
Lezi zinkunzi ezintathu zonke zinamaphuzu ayisishiyagalolunye ku-Group H, evuleke izolo kusihlwa ngesikhathi i-PSG ihlula i-United ngamagoli amathathu kwelilodwa. I-Leipzig iwine umqhudelwano wamagoli ayisikhombisa ibhekene ne-Istanbul Basaksehir esivele isusiwe.
UNeymar Jr ube yiqhawe le-PSG, oye emdlalweni ne-United edinga amaphuzu aphezulu ukuzisindisa ehlazweni lokuphuma ngokushesha.
Lo mdlali wase-Brazil ushaye amagoli amabili esiwombeni ngasinye esiza i-PSG ukuthi iwine e-Old Trafford, kanti futhi ibiziphindiselela ngokuhlulwa kwabo ngamagoli amabili kwelilodwa ekhaya ngoMfumfu. Lawo bekungamaphuzu amathathu amakhulu e-PSG ngoba manje bahamba phambili ku-Group H.
Noma i-United ne-Leipzig nabo babelana ngenani elifanayo lamaphuzu, ompetha base-France baseqophelweni eliphezulu ngenxa yomehluko wamagoli aphezulu.
Umqeqeshi we-PSG uThomas Tuchel ubeyindoda ekhululekile ngemuva komdlalo okungenzeka ukuthi uwusindisile umsebenzi wakhe. “Ukunqoba e-Old Trafford kungezinye zezinselelo ezinkulu emhlabeni,” uyasho. “Iqembu likhombisile ukuthi ngeke likwamukele ukuhlulwa.”
NgoLwesibili oluzayo i-PSG izokwamukela i-Istanbul Basaksehir emdlalweni wokugcina ka-Group H, kanti i-United idinga iphuzu uma iya e-Germany.
“Sithathe igxathu elikhulu, elinzima kakhulu, kodwa kusamele sithathe isinyathelo sokugcina. Kusamele sisebenze kanzima, sidlale ngomqondo ofanayo, umlilo ofanayo,” kusho uTuchel.
Izolo ebusuku kuphinde kwabonakala amanye amaqembu amane elungela ukungena kowamanqamu we-last 16 knockout . I-Chelsea ne-Sevilla babe ngabokuqala nabesibili ngokulandelana ku-Group E, kuyilapho i-Barcelona ne-Juventus bathatha u-Group G.
Laba bobane bajoyine ompetha abavikelayo i-Bayern Munich, i-Liverpool ne-Manchester City asebevele bengenile ku-last 16.
Eminye imiphumela evele izolo ebusuku:
I-Frencvaros 0-3 i-Barcelona, ​​i-Juventus 3-0 i-Dynamo Kyiv, i-Borussia Dortumund 1-1 i-Lazio, i-Sevilla 0-4 i-Chelsea, i-Club I-Brugge 3-0 i-Zenit, i-Krasnodar 1-0 i-Rennes, i-Istanbul Basaksehir 3-4 i-Leipzig.